कर्मचारी हुन् कि एजेन्ट ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २९ असार २०७६, आईतवार १०:३० लेखक नेपाली जनता
मोरङ । विराटनगर भन्सार कार्यालय । आइतबार बिहान ९ः५० बजे । भन्सार राजस्व बुझाउन र सवारीसाधनको अस्थायी पैठारी अनुमतिपत्र लिन खचाखच सेवाग्राही । भीडमा सेवाग्राहीभन्दा बिचौलिया बढी छन् ।
सबा १० मा राजस्व बुझाउने काउन्टरमा एक कर्मचारी छिर्छन् । राजस्व तिर्न फाराम भर्ने कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही अलमलमा पर्छन् । तर ठूला व्यापारीको राजस्व बुझाउन फाराम भरेर सलबलाइरहेका बिचौलियाको काम भने फटाफट हुन्छ ।
फाराम भर्न र लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीचाहिँ कर्मचारी नआउँदा घन्टौं पर्खिरहन्छन् । उनीहरूको काम ११ बजे फाराम फाँटमा छिरेका कर्मचारीबाट बल्ल सुरु भयो । बिचौलिया आफैले फाराम भर्छन् र राजस्व बुझाउँछन् ।
कर्मचारी आङ तान्दै र मोबाइल चलाउँदै बस्छन् । उनीहरूबाट फाट्टफुट्ट पुग्ने पोके व्यापारीको फाराम भर्ने मात्रै काम हुन्छ । अन्य फाँटभन्दा फाराम भर्ने फाँटका कर्मचारी यहाँ फुर्सदिला भेटिए । एजेन्टका लागि भर्ने फाराम र विवरण टिप्ने खाताबाहिर राखेर फाराम भर्ने फाँटका कर्मचारीले आरामसँग दिन बिताए ।
सँगै रहेको भन्सार महसुल बुझाउने स्थानमा पनि सर्वसाधारणभन्दा बिचौलियाको काम पहिले हुँदा राजस्व बुझाउनै मन नलाग्ने भन्सार कार्यालयअघि भेटिएका विराटनगर १५ का नारायण यादवले गुनासो गरे। उनले जोगबनीबाट ९ थान साडी किनेर ल्याएका थिए ।
‘कहिले फाराम भर्न ढिला गरिदिन्छन्, राजस्व तिर्ने ठाउँमा पनि एजेन्टलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
घरायसी सामान झोलामा बोकेर हिँड्दा सडकका सशस्त्रले राजस्व शाखामा पठाउँछन् । यहाँको हालत यस्तै हो,’ उनले आफूले भोगेको पीडा प्रस्ट पार्न खोजे । राजस्व शाखा र फाराम भर्ने शाखामा दिनभर यस्तै क्रम चलिरह्यो ।
गोलमोलमा सवारी अनुमति
भारततर्फको गेटछेउमै रहेको सवारीसाधनको अस्थायी पैठारी अनुमतिपत्र लिने स्थान यहाँको सबैभन्दा बढी भीड हुने शाखामा पर्छ । भारतबाट नजिकै रहेको नेपाली बजार विराटनगरसम्म पुगेर सोही दिन फर्कन यस शाखाबाट अनुमतिपत्र दिइन्छ । भारतीय गाडी कार, जपी र मोटरसाइकलले यो सुविधा दिन अनिवार्य सक्कल आरसी पेपर बुझाउनु पर्छ ।
आरसी पेपरमा लेखेको सवारीको नाम, चेसिस नम्बर, इन्जिन नम्बरसहित मिति र समय लेखेर अनुमतिपत्र दिने नियम भए पनि कर्मचारीले एजेन्टको दबाब र प्रभावमा समय नै नलेखी अनुमतिपत्र दिने गरेको प्रत्यक्ष भेटियो । कर्मचारीले नै ‘प्रहरीले चेक गर्दा अनुमतिपत्र मात्रै देखाउनू, आरसी पेपर नदेखाउनू नि’ भन्छन् । गोलमालमा अनुमतिपत्र दिँदा राजस्वमा गिरावट आउने गरेको छ ।
कर्मचारी कि एजेन्ट चिन्नै कठिन
भन्सार जाँचपास र राजस्व बुझाउने प्रत्येक कोठामा भीड हुन्छ। केही महिला कर्मचारी सरकारी पोसाक लगाएर आए पनि अधिकांश पुरुष कर्मचारी सरकारी पोसाकमा भेटिएनन् । फाँटमा फाइल, खाता र फाराम झिकेर काम गर्ने बिचौलिया हुन् कि कर्मचारी ? छुट्याउन हम्मेहम्मे पर्‍यो । ‘धेरैबेर कुर्सीमा को बस्छ ऊ नै कर्मचारी हो,’ कर्मचारीको विषयमा जानकारी लिँदा फाराम भर्ने स्थानमा फाइल पल्टाउँदै गएका एक एजेन्टले जबाफ दिए ।
प्रत्येक शाखामा ३ देखि ५ जनासम्म बिचौलिया भन्सार प्रज्ञापनपत्र भर्ने, कम्प्युटर इन्ट्री गराउनेदेखि हातमा कागजपत्र बोकेर सही गराउने काममा सक्रिय थिए । धेरै सेवाग्राहीले त झुक्किएर बिचौलियालाई काम लगाउने गरेको भेटियो ।
‘को कर्मचारी हामी चिन्दैनौं । धेरै सर हुनुहुन्छ । सबै कर्मचारी जस्तो लाग्छ । कसैले लेखेको भन्दा बढी पैसा माग्छन्,’ पसलको सामान लिएर आएकी विराटनगर १५ की व्यापारी राधिका खड्काले भनिन् । अनलाइन सिस्टममा भन्सारले काम सुरु गरे पनि एजेन्टले तोकिएभन्दा बढी पैसा लिने गरेको उनले बताइन् ।
जाँचपासपछि सामान थप
विराटनगर भन्सारमा लगभग एक सय संख्यामा आफूलाई आधिकारिक एजेन्ट बताउने व्यक्ति छन् । भन्सारमा १८ जना अनुमति प्राप्त एजेन्ट र सोही संख्यामा आधिकारिक प्रतिनिधि हुनुपर्ने हो । यसबाहेक बाहिरबाट आएका भन्सार एजेन्टका आधा दर्जन प्रतिनिधिसमेत गर्दा करिब ४५ जनाको संख्यामा आधिकारिक व्यक्तिहरु भन्सार जाँचपासका लागि खटिन पाउँछन् ।
तर, यो संख्या सय नाघेको प्रत्यक्ष भेटियो । प्रत्येक कोठामा पुगेर तपाईं कर्मचारी हो भनेर सोध्दा ४–५ जना सबै व्यक्तिले आधिकारिक एजेन्ट भएको जबाफ दिए । राजस्व काउन्टरमा काम गरिरहेका भारतीय नागरिक राजीव सेखले आफू एजेन्ट भएको बताए ।
भन्सार प्रज्ञापनपत्र भर्ने, कम्प्युटर इन्ट्री गराउनेदेखि हातमा कागजपत्र बोकेर विभिन्न शाखामा सही गराउने काममा उनीहरूकै भूमिका बढी हुन्छ । यसरी भन्सारभित्र बिगबिगी रहेका बिचौलियाले मिलेमतो गराएर जाँचपास प्रभावित बनाउने मात्र नभई जाँचपास भइसकेपछि मालवस्तु थप गरेर भन्सार राजस्व छली गराएको पनि देखियो ।
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बीमालाई बढी व्यवस्थित, प्रभावकारी तथा वैज्ञानिक बनाउने लक्ष्यका साथ बीमा समितिले म्यादी बीमा…
चीनसँग युद्ध लड्न भारतलाइ नेपालको सहयोग अतिआवश्यक
काठमाडौं । भारतले चीनसँग युद्ध गर्नको लागि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध बढाउनुपर्ने भारतको स्थल सेनाध्यक्ष विपिन रावलते जनाएका छन् ।…
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले ३३ झोले एनजीओलाई दिने निर्णय गरेको रकमको दोस्रो किस्ता निकासा दिन मन्त्रीले दबाब…
कार २० लाखको, कर ६५ लाख
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतबाट २० लाख रुपैयाँको कार आयात गरी नेपाल ल्याउँदा विभिन्न शीर्षकमा गरी कुल ६५ लाख…
केट सिल्वर, बीबीसी न्यूज। जब एक पुरुष कुनै महिलासँग बिना इच्छा जबरजस्ती यौन सम्बन्ध बनाउँछ भने त्यो बलात्कार हुन्छ,…